IZAHAY MITSARATRA IZANY
IZAHAY MANDEHA ITY
MIVAROTRA AZY IANAO
Ataovy tsara eo amin'ny sehatra famolavolana
Pandawill dia manome fanohanana endrika PCB tsy hoe famaritana izay ilainay ihany, fa koa izay ataonay amin'ny volavolanao manomboka amin'ny fahazoana data hatramin'ny vokatra vita. Ny famolavolana PCB dia misy: Haingam-pandeha, Analog, Hybrid Digital-analog, Density / TOSIKARATRA / Herinaratra, RF, Backplane, ATE, Birao malefaka, Birao matevina-Flex, Board Aluminium sns
Multilayer, HDI, fihodinana haingana
Ny Pandawill Circuits dia manamboatra sy manome karazana teknolojia avo lenta avo lenta avo lenta, volavola, vidiny ary fanamboarana safidy mialoha ny foto-kevitra momba ny fizotran'ny PCB sy ny fivoriambe ary ny zavatra takinao.
Kalitaon'ny famatsiana, fahamendrehana amin'ny fandefasana, vola lany
Miaraka amin'ny ekipa mividy za-draharaha sy matihanina, manana ny fahaiza-manao izahay hamantatra ny safidin'ny loharanom-pahalalana mifototra amin'ny filana manokana an'ny vokatra sy ny mpanjifa tsirairay ary manome ny fizarana optimised sourcing, ny fandefasana entana, ny fihenan'ny vidiny ary na ny fitantanana stock aza.
Manomboka amin'ny prototyping ka hatramin'ny famokarana betsaka
Miaraka amin'ny fahaiza-mamory amin'ny alàlan'ny lavaka (THT) sy ny tampon'ny mount (SMT), samy mitarika ary misy ny RoHS, ny serivisy PCBA dia manomboka amin'ny prototype ka hatrany amin'ny fananganana fivoriambe PCB sarotra sy teknolojia marobe ao anaty volabe sy antonony.
FIVORIANA BOX & MEKANIKELY
Manohana anao hatrany A ka hatramin'ny Z
Ho fanampin'ny serivisy fivoriambe PCB, manome boaty fananganana fidirana boaty ho an'ny rafitra sy modules ary koa ho fampidirana vokatra feno izahay. Amin'ny alàlan'ny tamba-jotra mpamatsy tianao indrindra, manohana anao hatramin'ny A ka hatramin'ny Z izahay, manomboka amin'ny teny nalaina hatramin'ny dingana famokarana betsaka ny tetikasanao.